jornalizem - Wararka Somaliya
DEG DEG: Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo Loo Doortey Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya
Mudanayaasha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa maanta u fariistey in ay doortaan shirguddoonka Aqalka sare, waxaana ka qaybqaatey 52 Mudane oo kamid ah 54 mudane ee aqalka sare ka kooban yahay.
Xilka guddoomiyaha waxaa ku tartamey Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mustaf Qodax. Doorashada ayaa martey hal wareeg waxaana cod aqlabiyad ah ku guuleystey Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Xaashi ayaa helay 43 cod halka ninka la tartamayey ee Qodax uu helay 9 cod oo keliya.
Mudane Xaashi ayaa ah nin waaya arag ah muddo dheerna ka soo tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, waa 70 sano jir, waxa uu horey u soo noqdey wasiir dowladihii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya.
Xaashi ayaa noqonayaa guddoomiyihii u horeeyey ee aqalka sare ee Soomaaliya abid yeesho. sida lagu sheegay taariikhdiisa waxa uu ku dhashey magaalada Baabili ee Itoobiya hoostagta, waxaana uu aqalka sare ka soo galay Somaliland.
Madaxweyne C/weli Gaas oo si kulul uga hadlay Gabadhii lagu kufsaday deegaanada Puntland
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas, ayaa si adag uga hadlay Gabar maalmahii lasoo dhaafay lagu kufsaday oo ka dhacay degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay falkaasi waxa uuna tilmaamay in maamulka Puntland uu ciribtiri doono kuwa caadeystay kufsiga Gabdhaha.
Gaas ayaa tilmaamay inuu aad uga danqaday falkaasi, waxa uuna carab dhabay in Ciidamada amaanka ay si gaara isaga xilsaari doonaan ilaalinta sharafka dumarka Soomaaliyeed, waxa uuna arrin fool-xun ku sheegay ficilkaasi.
Idaacada (Kulmiye) KNN ee magaalada Muqdisho, ayaa baahisay in Madaxweynaha maamulka uu ku goodiyay in talaabo sharci ah laga qaadi doono 5-ta ruux ee loo qabtay falkaasi, isagoo ciidamada amaanka ku amray inay muujiyaan dadaal lagu badbaadinaayo dumarka.
Waxaa uu Mr Gaas arrin lalayaabo ku sheegay in falka noocaasi ah kadib ay dhalinyaradaasi ku dhiiradaan inay duubaan muuqaal aad looga argagaxo.
Madaxweyne C/wali Gaas ayaa falkaasi kadib xiriir la sameeyay maamulka degmada Galdogob iyo Laamaha cadaalada Puntland isla markaana faray in dhalinyarada falkaasi loo qabtay la horkeeno Cadaalada, sida ay sheegtay KNN.
Sidoo kale, Cabdiweli Gaas, ayaa Gabadha falkaasi lagula kacay iyo qoyskeeda u ballanqaaday inuu garab kasiin doono xalinta dhibkaasi, waxa uuna ugu laabqaboojiyay in dhalinyaradaasi la horgeyn doono Cadaalada.
kuxidhnow waxii cusubhttp://www.jornalizem.com/​
XOG: Maxaa ka jira in Beesha Caalamka aysan aqoonsan doonin Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, haddii Xildhibaanada ay
​Madaxweynaha cusub ee la filayo in Soomaaliya loo xulo ayaa laga cabsi qabaa in beesha caalamka aysan aqoonsan, haddii hanjabaad kasoo yeertay Michael Keating laga dhabeeyo.
Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa uga digay musharrixiinta madaxweynaha ee ka qayb-galaya doorashada dhawaan ka dhacaysa dalka inay musuq maasuq ku kacaan.
Qoraal uu ku saxiixna wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Micheal Keating oo loo diray dhamman musharrixiinta madaxweynaha u tartamaya ayaa loo sheegay in la doonayo dalka inuu helo madaxweyne soo celinaya sumcadda Soomaaliya.
Qoraalka Keating ayaa yimid markii beesha caalamka ay soo gaareen caddeymo muujinaya in musharaxiinta ay lacag madaxdiid ah u yaboohayaan xildhibaanada si ay codkooda u siiyaan.
Qoraalka Keating ayaa waxaa looga digay musharrixiinta madaxweynaha inay isku dayaan inay codadka iibsadaan, taasi oo haddii ay dhacdo Qaramada Midoobay ay sheegtay inaan la aqoonsan doonin dowladda.
Waa ay caddahay in madaxweynaha Soomaaliya ee imanaya midkuu doonaba ha ahaadee uu lacag ku iibsan doono codadka, waxaase caddeyn in Qaramada Midoobay ay ka dhabeyn karto hanjaabadd ay soo jeedisay.
Haddii Qaramada Midoobay ay ka dhabeyso hanjaabaddan, Soomaaliya ayaa yeelan karta madaxweyne beesha caalamka aysan aqoonsan, taasi oo hoggaamin karta afar sano oo waqti lumay ah.
Bayaan ka soo baxay aqoonyahanada iyo waxgaradka Dhulbahante Taageero baaqii Isimada beelaha Dhulbahante
​Aqoonyahanada iyo waxgaradka beelaha Dhulbanahte waxay taageerayaan talaabo kasta oo difaacaysa jiritaanka, madaxbanaanida, isu taliska shacabka SSC iyo ilaalinta nabada iyo midnimada Somaliya.
Hadaba anaga oo ka duulayna dareenka guud ee shacabka SSC dal iyo debedba waxaanu ugu horayn ku bogaadinayna kuna taageeraynaa Isimada beelaha Dhulbahante baaqii ay soo saareen maalintii taariikhdu ahayd 28.12.2016.
Baaqaas oo Isimadu iyagoo qaadanayaa maqaamkoodii loo igmaday ay ku dhaleeceeyeen kagana soo horjeesteen in maamulka beesha Isaaq kala xaajoodo Dr.Cali Khaliif Galaydh iyo koox uu xushay arimaha masiiriga ah ee shacabka
Anaga oo taageerayna baaqii Isimada waxaanu u cadaynaynaa maamulka Siilaanyo iyo beelaha Isaaq Qodobada hoos ku qoran:
1. In Dr. Cali Khaliif Galaydh ka weeciyey ama ka weecday hadafkii iyo ujeedooyinkii loo aasaasay Khaatumo, isagoo ku takri falay go’aamo masiiriya oo uusan kala tashan cida taladu ka go`do. Sidaa darteed uusan matelin shacabka reer SSC.
2. In aan wax wadaxaajood ah lala furi karin maamulka beesha Isaaq ilaa inta ciidan Isaaq ahi joogo carro Dhulbahante.
3. In waxkasta oo wada xaajood ah oo khuseeya aayatiinka beelaha SSC ay Isimada beelahaasi bixiyaan ogolaansho maadaama ay yihiin hay`ada ugu saraysa.
Waxaa kale oo aanu taageersanahay shacabka SSC ee gudaha iyo debeda ee difaacaya jiritaanka, madaxbanaanida iyo midnimada SSC oo ay ugu horeeyaan garabka Badbaado Khaatumo oo ka jirta gudaha dalka iyo dibedba.
Liiska saxeexayaasha Taageerida baaqii Isimada beelaha Dhulbahante.
1. Osman Hassan x. Omar (Badawi)
2. Abdisalaan haji Ismail Abokor
3. Ismail Diriye Gamaadiid
4. Yusuf Haashi
5. Mohamed Ali Mire
6. Saynab Xasan Bare
7. Abdirisaq Yusuf M.Hindi
8. Caynashe Abdirahman
9. Ibrahim Ahmed Musse
10. Cadar Ismaciil Dhabdhable
11. Cabdiqaadir Ciise Oog
12. Jama Yassin
13. Jamaal Ali Elmi
14. Abdillahi Hassan Spanish
15. Weris xaji Cabdi Iskatoos
16. Abdirizak khalif mohamud
17. Shugri Caydiid Dhabdhable
18. Abdirizak ahmed nuur
19. Abdifatax mohamed Geedeeye
20. Mohamed jama dubad
21. Abdimalik Sheikh Osman
22. Cabdillahi ismail Dhalakoor
23. Ahmed Mohamed Handulle
24. Ahmed Suleyman Hassan
25. Abdirahim Abdillahi Haji Omar
26. Ahmed Geele
27. Shucayb M. Ducaale Qambi
28. Ahmed Mohamud Doolaal
29. Hoda Cali Mirreh
30. Anisa Cali Diriye
31. Yurub Mohamud Cabdi
32. Col. Jamac Cali Guray
33. Bashiir Osman Xashi
34. Cabdillahi Diriye
35. Jamal Abokor Joofey
36. Yusuf Garaad Saleban Garaad Mohamed
37. Abdirahman Adan Abdille
38. Yusuf mohamed Abdulle
39. Safiya Adan Cali dheeg
40. Faysal Cali Mas
41. Amina Xasan Geele
42. Faysal Falaluug
43. Ismacil Ibrahim Ducale Aftaag
44. Siciid Ibrahim Ducale Aftaag
45. Mohamed Ali Clay
46. Abdirahman Osman Yare
47. Abdiweli Hassan Mohamed
48. Aabdelle Hassan Mohamed
49. Fardowsa Hassan Mohamed
50. Caaqil Rashiid Jama Dahir
51. Jama Hassan Nuur
52. Ismail Ali Boobe
53. Aden Garaad Soofe
54. Bashiir Mohamud Doolaal
55. Yusuf Mohamed
56. Jamal Husein Dirir
57. Hassan Maxamud Jaamac (food)
58. Adan Jamac dhegcas (Blcak)
59. Saciid Yuusuf Boss
60. Bashir Maxamed
61. Husein Adan Farah
62. Cabdinasir Maxamed Dirir
63. Adan Mohamed Mahamud
64. Mahamed Saleebaan Boss
65. Maxamed a.Ali
66. Maxamuud Xirsi Gelle
67. Ibrahim Cabdi Husein
68. Cali Ismaciil Dawacajiqil
69. Cabdilaahi Sheikh (Suxufi Haaruun)
70. Maxamed Xaaji Adan
71. Hassan Nur Mohamed
72. Keyse Jama Dhaaye
73. Mohamud Ali Ayax
74. Cabdillahi Ciise Xamari
75. Yasin Cawed
76. Maxamed Cismaan Foodcade
77. Maxamud Aadan Dubad
78. Ibrahim Cabdillahi Maxamud (khatin)
79. Maxamed Cali Qambi
80. Axmed Geele Xuseen
81. Axmed Muuse Xasan Falaalug
82. Ifraax Jaamac Unuun
83. Kaltuun Axmed Maxamed
84. Cabdiqani Nuur Xaan Falaalug
85. Ismaciil Xasan Cabdalle
86. Sheekh Cabdinasir Shube
87. Maxamed Maxamud Joofey
88. Maxamud Xasan Xaaji Cumar
89. Cabdirisaaq Khaliif (salxaan)
90. Cumar Maxamud Maxamed (jarkunaban)
91. Mubarak Ismail Haybe
92. Siciid Cismaan Foodcade
93. Axmed Maxamed Xasan Falaalug
94. Maxamud Xaaji Aadan (indhabuur)
95. Axmed Ducaale Darwiish (caato)
96. Rage Mihamed Ali shire
97. Abdillahi sheikhdon
98. Aden Hassan Jama
99. Abdullahi Farah Ateeye
100. Ali Diraac Ow Sahal
101. Abdirahman Hirsi Dhabdhble
102 cali cumar jaamac
103 ahmed yousaf garaad
104 maxamed cali badwi
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Puntland Oo Beeniyey Waxyaabo Badan Oo M/wayne Gaas ku sheegay Khudbaddiisii Sanadlaha ahayd
​Xildhibaano katrisan barlamanka Puntland, ayaa ka hadlay waxqabad todobaadkii tagay soo bandhigay Madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas oo sheegay in xukuumaddiisu qabatay saddexdii sano ee lasoo dhaafay.
Mudanayaasha kala ah; Burhaan Aadan aw-Cabdi, Gaacshe Maxamed Axmed iyo Nuuradiin Cabdirashiid Cali oo waraysi siiyay Radio Garowe, ayaa sheegay in waxyaabaha Madaxweynuhu warbaahinta ka sheegay aysan waxba ka jirin iyagoo tilmaamay in mudadii uu dalka taladiisa hayay wali lasoo gaarsiin hishiis uu lasoo galay dalal iyo shirkado ajnabi ah.
Xildhibaanada, ayaa Madaxweynaha ku dhaliilay inuu dalka gaarsiiyay xaalad adag oo iminka adagtahay in wax laga qabto gaar ahaan dhinaca dhaqaalah iyo wax u qabashada shacabka.
Wax-qabadkii uu akhriyay ayay sheegeen inay ahaayeen mashaariic waddanka ay ka fuliyeen hay’ado shisheeye.
Mar wax laga weydiiyay tallaabad ay qaadayaan, waxay sheegeen in go’aanku u yaallo golaha oo idil, laakiin hadalkoodu daaranyahay in dalku ku jiro dhib aan lagu fiirsan karin.
Waxay sidoo kale cadeeyeen inay dhowr jeer oo hore Madaxweynaha kala hadleen la wadaagista hishiisyada uu galo, balse taas badalkeeda ajiibi wayay.
Mudanayaasha ayaa sidoo kale ka marag kacay inaan dowladdu tan iyo 2014 aysan bixin mushaharka shaqaalaha dowladda.
Gurmadka abaaraha oo ay dowladdu ugu deeqday 1 Malyan ayaa Xildhibaanadu cadeeyeen inaysan xukuumaddu wali bixin oo ay ku laalantahay wasaaradda maaliyadda, taasoo guddiyada gurmadka loo xilsaaray ay ku daaleen sidii ay uga dalbanayeen bixinta lacagtaas.
Waxay ka marag kaceen in Xildhibaano badan ku milmeen golaha xukuumadda taasina shaki galisay shaqooyinkii loo igmada gaar ahaan u adeegista shacabka iyo la xisaabtanka dowladda.
Hadalkan ayaa yimid xilli khudbad dheer oo Madaxweyne Gaas jeediyay dhammaadka todobaadkii hore aad bulshadu isu weydiisay, maadama waxyaabo badan oo ka hadlay aan looga baran in hogaamiyaasha dalka ugu sareeya ay ka waramaan, halka waxyaabo badan oo uu sheegay inuu wax ka qabtay lagu dhaliilay.
shirkadda isgaarsiinta TELESOM oo gargaar ku wareejisay gudiga abaaraha degmada Xuddun
Gudoomiyaha shirkadda Telesom Sheekh Aadan Cilmi Dheere oo deeqdaasi ku wareejiyey gudiga ayaa waxa uu sheegay in deeqdani ay qayb ka tahay gargaar shirkadu kaga qayb qaadanayso abaaraha dhacay.
“Waxaan idinku wareejinaynaa 60 booyadood, waxaana u deyney qaybinta gudiga abaaraha oo nooga xogogaalsan sida loo kala jilicsan yahay” sidaa waxaa yiri Aadan Cilmi.
Gudoomiyaha gudiga Abaaraha D. Xuddun C/casiis Cawil Caateeye ayaa u mahad celiyey Shirkadda waxaanu sheegay in ay ilaa 20 magaalo oo Xuddun hoos yimaada ay anagoo u eegayna buu yidhi sida ay u kala liitaan.
Maxamed Jaamac Mahad oo ka mid ah gudiga abaaraha ayaa waxa uu qayladhaan dheer ka diray abaarta oo ka sii daraysa maalinba maalinta ka danbaysa, waxaanu intaas ku daray in qurbajoogta iyo ganacsatadu ay
gurmad sameeyaan badbaado.
Si kastaba ha ahaatee deeqda shirkadda TELESOM ay qaybinayso ayaa ah mid wax ka taraysa dhibaatada baad iyo biyo la’aanta aafaysey bulshada degaankasi ku noolayd iyo guud ahaan inta badan Soomaaliya.
Laascaanood, Gobolka Soo
Doorashada Xubnaha Aqalka Sare ee Gobolada Waqooye oo dib uga bilaabatay Muqdisho
Maanta ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho dib looga bilaabo doorashada xubnaha aqalka sare u matalaya goboladda waqooyi ee dalka, Waxaana Maanta la filaayaa in la doorto seddex kursi oo ay ku kala tartami doonaan.
Kursiga koowaad ee Doorashada maanta ayaa waxaa ku Tartamayo ilaa afar musharax oo kala ah Maxamed Aadan Waaberi, Xuseen Ceelaabe Faahiye, Axmed Cabdi Faahiye iyo Ayuub Ismaaciil Yuusuf.
kursiga labaad ayaa asagana waxaa u sharaxan Hodan Abuukar Xasan, Deeqo Xasan Xuseen iyo Amran cilmi fariid.
Kursiga Saddexaad ayaa waxaa asagana waxaa ku tartami doono Cumar Maxamed Aadan , Nuuro Faarax Jaamac iyo Caasho Axmed Cabdalaahi.
Gudoomiye Jawaare oo dalbaday in deg deg loosoo dhameys tiro Barlaamka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayaa ka codsaday gudiga doorashooyinka in ay dedejiyaan Doorashada 14 xildhibaan ee ka dhiman Baarlamaanka Soomaaliya.
Gudoomiye Jawaare ayaa xusay in howlaha baarlamaanka ay u xiyiranyihiin Xubnaha ka maqan oo uu sheegay in ay muhiim tahay in si deg deg ah lagu soo dhameys tiro si ay u guda galaan doorashada Madaxweynaha Umadda Soomaaliyeed.
Labada aqal ee soomaaliya ayaa la qorsheynayaa in ay ka wada qeyb qaataan doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan ka dhici doonto magaalada Muqdisho.
Shirkii madasha-wadda-tashiga oo la filayo in uu maanta ka furmo Muqdisho
Maanta ayaa lagu waddaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirkii madash-wadda-tashiga Qaran ee hogaamiyayaasha Soomaalida, kaa looga wadda hadli doono geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka.
Qodobada kulanka looga hadli doono ayaa siddoo kale waxaa qeyb ka noqonaya tabashada dowlad gobolleedka Puntland ee la xiriirta sidda loo maareeyay xildhibaannada gobollada W/qooyi, taasoo keentay in hakad la galiyo doorashada xubnaha aqalka hoose ee ka soctay Garoowe.
Madaxda ka qeyb galeysa shirka ayaa waxaa ka mid ah madaxweynayaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh, Madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Muqdisho.Waxaa siddoo kale Muqdisho jooga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiin Xaaji Camey, halka madaxweynaha Jubbaland la fillayo in isla maanta uu soo gaaro magaalada Muqdisho.
Shirka ayaa waxaa goob joog ka noqonaya Wakiilada Beesha Caalamka oo walaac ka qaba in doorashada ay mar kale dib u dhacdo, iyadoo saddex jeer oo hore dib u dhacyo ku yimaadeen.
Ugu danbeyntii, maamulada Jubbaland iyo Koofur Galbeed ayaa illaa iyo hada soo dhameystiray doorashada xubnaha Aqalka Hoose, halka Maamulada Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle ay u harsan yihiin dhowr xubnood.
Madaxweyne Xasan oo kulan gaar ah la qaatay Xildhbaanada Labada Aqal ee Kismaayo lagu doortay
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay Xildhibaannada labada Aqal ee lagu doortay Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Xasan Sheekh, ayaa horay ugu hambalyeeyay guushii ay ka gaareen doorashadii dhacday Kismaayo. Wuxuuna Kulan Dar-daarmay Xildhibaanada Labada Aqal ee Kismaayo lagu doortay inay ka shaqeeyaan Danaha Dadka Soomaaliyeed iyo kalsoonida siiyay iyo mida Guud Qaranka ee loo wakiishay.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa xusay inay guulo waa weyn ay tahay in maanta Shacabka Soomaaliyeed iyaga oo jooga degaanadooda ay doorteen Shaqsiyaadka wakiilka uga noqon lahaa danahooda degaan iyo mid Qaran.
”Shacabka aad wakiil uga noqeysaan Baarlamaanka oo idinku aaminay inaad wakiil uga noqotaan danaha Qaranka ayaa idin ka sugayaa waajibaadkiinna. ALLE ayaa mahad leh maanta waxay Somalia mareysaa in dad heerarkooda kala duwan oo ay iyagu wakiisheen u doortaan danahooda oo ay Baarlamaan maamul-goboleed iyo madaxdooda tahay ee shacabka degaanka u doorteen inay ka shaqeeyaan amuurahooda heer deegaan iyo haddii mid hHeer Qaran tahay oo ay idinku idin doorteen si aad ugu matashaan amurahooda Somalia oo dhan kala dhaxeeya sidaa awgeed waa horumar weyn oo ay Soomaaliya gashay,” ayuu ku yiri hadal uu Madaxweynuhu u jeediyay xildhibaannada labada Aqal ee Kismaayo lagu doortay.
Madaxweynaha ayaa intaas ku daray. “Dhismaha Maamul-Gobolleedka Jubbaland, waxay keentay wax lagu farxo oo ah in Siyaasiyiin badan oo idin ka mid ah in ay deegaanadooda yimaadeen oo ay Xildhibaanno u soo doonteen kuna Guuleysateen. Kaliya Doorashadu ma ahayn waxa ka dhacay Kismaayo ee waxaa la socday dib u Heshiisiin Maadaama Dadkii degaanada Jubbaland ay Kismaayo isku yimaadeen, si nabad iyo dimuqraadiyad ahna isku doorteen, si la mid ah dorashooyinkan dib u heshiisiinta la socoto waxay ka dhacayaan magaalooyinka Maamul-gobolleedka dhistay sida Baydhabo, Cadaado iyo Jowhar.”
Ugu dambeyn, Madaxweynaha Somalia ayaa mid mid uga Jawaabay Xildhibanada su’aalo ay weydiiyeen, kuwaa oo uu si waafi ah uga jawaabay Madaxweyne Xasan Sh Maxamuud.